axmeddheere65@hotmail.com Axmed Muuse Cabdulle(Idaawaqaca) Kenya,Nairobi Somalitalk
MADAXWAYNE CABDULAAHI YUUSUF OO KA DHURSUGAYA XUBNAHA BAARLAMAANKA SOOMAALIYA IN AY IS WAA FAJIYAAN QODOBADA 46-47 SI UU 'UMAGACAABO WASIIRKIISA KOOWAAD
MAGAYADA HUBNAHA U TAAGAN XILKAAS
Tan& caleemo saarkii madaxwaynaha Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Yuusuf Axmed 14 Ogtobar waxaa la hadal hayay cida noqonaysa Wasiirka Koowaad ee Soomaaliya iyadoo madaxwaynuhu waday kulamo is daba jooga iyo wada tashiyo ku aadan cida noqon la heed Wasirka Koowaad ,
Madaxwaynaha waxa uu xaq uleeyahay in uu ka fakaro cida noqonaysa wasiirka koowaad waxa uuna leeyahay bil ka bilaabanaysa Xiliga loo dhaariyo waa jibkiisa qaran,
Dhinaca kale waxa madaxwayne Cabdulaahi Yuusuf ka Codsaday Xubnaha Baarlamaanka in ay isi waa fajiyaan Qodobada 46-47 oo iyagu kala qoraya in Wasiirka Koowaad waa in uu ahaadaa Xubnaha baarlamaanka iyo waa ka imaankaraa banaanka
Hadaba sida uu sheegay madaxwaynaha Soomaaliya Cabdulaahi Yuusuf Axmed waxaa wasiirka Koowaad iska leh Beesha Qatan iyadoo beeshaa qatani ay tahay Beesha Hawiyi
Tusaale ahaan Madaxwaynaha Soomaaliya waa Daarood Gudoomiyaha Baarlamaanka waa Digil&Miriifle Gudoomiye ku xigeenka koowaadna waa Beeshashanaad iyadoo gudoomiye ku xigeenka Labaadna yahay Dir
Hadaba beesha hawiya ayaa iyadu loolan culus ugu jirta cida noqon laheed Wasiirka Koowaad waxaana ilaa iyo hada utaagan xubnahan kala ah
1-Maxamed Cumar Xabeeb
2-Bashiir Raage Shiiraar
3-Cali Maxamed Geedi
4-Daahir Sh Maxamuud
5-Cumar Cabdulaahi Ahmed
6-Cabdulaahi Axmed Afrax
7-Xuseen Xaaji Bood
8-Xuseen Cali Axmed
9-Maxamed Xusen Cadow
10- Maxamed Sh Gabyoow
En Xuseen Maxamed Faarax Caydiid
Maxamuud Maxamed Gacmo Dheere
Maxamed Maxamuud Culusow
Cabdulaahi Axmed Cadow N.B iima Xaqiiqsana
Maxamed Qanyare Afrax
Waxaad moodaa in arinka wasiirka koowad aad u sii adkaanayo iyadoo hogaamiyaasha siyaasadu sheegaya in hadii laga soo xulo Xubno aan iyagu ka mid aheen Baarlamaanka xaalku sii Xumaanayo halka qolyaha kale ku doodayaan in aysan soomaaliya aheen 275 Xubnood oo qura balse Aqoonyahankii Siyaasiyiintii ay wali banaanka Ka Joogaan loona baahanyahay in Soomaaliya oo dhan ay doowladan ka wada muuqdaan
WARARKII Oct 30, 2004
Gudoomiyaha baarlamaanka oo baaq Nabadeed u diray Ciidamada isku haya Xadka Adhi Cadeeye.
Xildhibaano la arkay ayaagoo Bisha ramadaan cabaya Sigaar
Wasiirka koowaad oo lagu wado in la magacaabo 1da november
Madaxweynaha iyo wasiirka kowaad ee uu magacaabi doono oo safar u tagi doona 2da bishan november xarunta Jaamacada Carabta.
Canab Abdule | canabmumtaz@yahoo.com
Gudoomiyaha baarlamaanka FKMG ah ee soomaliya shariif Xasan Sh.Aadan oo shirkii saakay ee baarlamaanka shir gudoominayay ayaa baaq nabadeed waxa uu u diray maliishaadka isku haya xadka Maamulada Puntland iyo Somaliland,gudoomiyaha waxa uu ugu baaqay in dadkaasi ay tixgaliyaan bisha barakaysan ee Ramadaan oo ah bil cibaado iyo is caffin ayna u naxaan shacabka soomaaliyeed ee u baahan nabada isagoo ku hadlayay magaciisa kan baarlamaanka FKMG ah ee soomaaliya.
Gudooomiyaha waxaa kale oo ugu baaqay labada dhinac in ay sameeyaan colaad joojin iyo is dhexgal nabadeed si looga baxo dhibaatada sokeeye ee ka dhalatay dagaaladas,madaxda labada ciidana ay ku dadaalaan sidii aysan markale dagaalo halkaasi uga dhacin loona soo afjari lahaa waxii dhacay shalay,kuwo cusubna looga digtoonan lahaa.
Dhinaca kale baarlamaanka ayaa Maanta soo gabagabeeyay xeer hoosaadka baarlamaanka FKMG ah oo baryahan ay doodaas uga socotay xarunta Ambagthi.
Guddiga Nidaaminta mid ka mid ah oo maanta baarlamaanka kala hadlayay in aan lagu xadgudbin anshaha ayaa sheegay in ay jiraan qaar ka mid ah baarlamaanka oo xiligan oo lagu jiro bisha barakaysan lagu arki karo iyagoo cabaya sigaar taasna ay muhiim tahay in ay ka digtoonaadaan baarlamaanka.
Qodobadii kale ee laga dooday waxaa ka mid ah shuruudaha Madaxweyne oo ay ka mid ahayd lacag ka qaadista tartamayaasha madaxweyne,waxayna soo jeediyeen qaarkood in laga saaro qodobkaas xeer hoosaadka si aysan u noqon wax dhaqan gala oo soo jireen noqda.
Wasiirka koowaad oo lagu wado in la magacaabo 1da november kadib marka laga doodo isniinta Qodobada iska soo horjeeda.
Baarlamaanka FKMG ah ayaa ka doodi doona maalinta isniinta ah Qodobada 46/47 ee Axdi Qarameeka FKMG ah oo ku saabsan magaabisya wasiirka kowaad ahna qodobo iska soo horjeeda,Q.46 waxa uu sheegayaa in Ra'iisul wasaaraha laga dhex doorto Baarlamaanka dhexdiisa.halka Q.47 uu sheegayo in baarlamaanka dhexdiisa iyo dibada laga magacaabi karo Ra'iisul wasaaraha waxayna keentay in arrintan ay dib u dhigto magaabista Ra'iisul wasaaraha sida uu sheegay dhawaan madaxweynaha FKMG ah.
Qodobadan ayaa dhaliyay buuq badan iyadoo baarlamaanka qaar ka mid ah ayba la yaab ku tahay waxa loogu xirayo qodoban kuna haboon in madaxweynuhu iska magaabo,balse madaxweynaha ayaa soo jeediyay in baarlamaanka uu kala tashanayo magacaabista jagadaas iyo waliba ka doodista labadan qodob.
Baarlamaanka ayaa u balansan in ay ka doodaan labadan qodob ayna ansaxiyeen ka dib marka cod loo qaado qodobkii ay isku raacaan in uu shaqeeyo kadibna isla maalinta isniinta ah uu ku dhawaaqi dooni madaxweynaha Ra'iisul wasaaraha oo si wayn loo wada sugayo magacaabistiisa.
Waxaa loo badaniyaa in wasiirka kowaad laga soo magacaabi doono dibada,balse waxaa soo baxaya warar sheegaya in siyaasiyiintii uu ka balan qaaday C/llaahi yuusuf in uu siinayo jagadan ay ka wada warsugayaan cida uu u magaabo madaxweyne C/llaahi Yuusuf Wasiirka kowaad.
Warar aan ka helnay illo xog ogaal ah ayaa sheegaya madaxweynaha DFKMG ah ee Soomaaliya iyo Ra'iisaul wasaaraha ay safar ku tagi doonaan xarunta Jaamacada Carabta ee Qaahira Marka uu ka magacaabo wasiirka kowaad.
Kulankan ayaa ku saabsan sidii ay wafdigan taageero dhaqaale uga dalbadan lahaaayeen jaamacada carabta si kor loogu qaado howlaha ay dowladdu u baahan tahay ee dib u dhiska dalka iyo Arrimo la xiriira Xagga amaanka oo wax wayn looga qaban doono sida ay wararkaasi sheegayaan.
Safarkan oo ku beegan labada bisha November ee sanadkan 2/11/04, waxaa madaxweynaha ku wehlin doona wasiirka koowaad oo lagu wado in la magacaabo kowda bisha november 1/11/04 ee sanadkan.
Madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka FKMG ah ee soomaaliya ayaa horay safar ugu tagay xarunta AU-da ee Addis Ababa,waxa uuna madaxweyne Yuusuf ka dalbaday AU-da in ay siiyaan ciidamo nabad ilaalineed oo gaaraya 20,000 balse wali si rasmi ah aysan Ururka Midnimada Afrika uga soo saarin go'aan kama dambays ah oo ku aadan in ciidamo loo diri doono Somaliya iyo In kale.